Umatshini wokwenza iCompost, Umatshini wokujika umquba-Tagrm
I-Nanning Tagrm Co., Ltd igxile ekuyileni nasekwenzeni izinto ezahlukeneyo zokujika komgquba, izixhobo zokuvundisa kwezinto eziphilayo kunye nokukhuselwa kwendalo. Ngeminyaka engama-30 yophando oluqhubekayo kunye nophuhliso, kunye nezibonelelo zokusetyenziswa okuphantsi, imveliso ephezulu kunye nefuthe elikhawulezileyo, iimveliso ze-TAGRM ziphumelele ngaphezulu kwamalungelo awodwa abenzi belizwe.
NGAPHEZU kwe-13000 yeeMitha zeSquare
NGAPHEZU KWEMVELISO EZI-15
CE umquba ukwenza umatshini umntu ihagu imfuyo ...
IQELA LOBUGCISA LOKUGQIBELA
Iqela lobuchwephesha le-TAGRM liqela eligqwesileyo elinamava eminyaka yobuchule kunye nobuchule obuqaqambileyo. Ukuhlangabezana neemfuno zentengiso, i-TAGRM iya kuhlala ijolise kulwakhiwo lweqela leetalente.
Iijikelezi zeefestile ze TAGRM zilungele isikali esincinci ukuya kwesikhulu somgquba. Banokusebenza okuhle njengokusebenza ngokusebenza okuphezulu, izinto ezomeleleyo kunye nezomeleleyo, ukusebenza okukhuselekileyo nokukhululekileyo, njl.
Inkonzo yasemva kokuthengisa ye-TAGRM kwindawo yokuguqula umgquba ibandakanya isikhokelo sobuchwephesha bobuchwephesha, unikezelo lwezixhobo zolondolozo, ulondolozo lwamaxesha ngamaxesha, njl.